Eshibhile Foring izingxenye insimbi engagqwali ifektri kanye nabaphakeli | I-Ouzhan
"I-punch ebomvu" empeleni inqubo eshisayo yokukhipha. I-punch ebomvu engagqwali yokwakha i-die idinga ukusebenzisa i-carbide ehlanganisiwe yensimbi. Ubulukhuni be-carbide yensimbi eboshwe ngensimbi buphansi kunobo be-carbide obusimende, futhi ukuqina komthelela wayo kungcono kune-carbide eqinisekisiwe. Ngaphezu kwalokho, i-carbide yensimbi eboshelwe ngensimbi ingashintshwa kuqala bese icinywa.
Insimbi engagqwali isibhakela esibomvu sokufaka-ukucacisa insimbi engagqwali yokwakha izingxenye nezingxenye
I-carbide ehlanganisiwe yensimbi ayinamandla amakhulu kuphela, ukuqina, kepha futhi ingacutshungulwa ngemishini ehlukahlukene nokucubungula okushisayo, futhi inobulukhuni obuphakeme be-carbide eqinisekisiwe (ngemuva kokucima nokushisa, ingafinyelela (68 ～ 73) HRC, ephezulu gqoka ukumelana Ngakho-ke, ilungele kakhulu ukukhiqiza izikhunta ezahlukahlukene.Nokho, ngoba i-carbide ehlanganisiwe nensimbi eboshwe ngosimende iyabiza futhi inobulukhuni obubi, kufanelekile ukusebenzisa okufakwayo ukuvela kwisikhunta ukwandisa impilo yenkonzo yesikhunta futhi ugcine okokusebenza kanye nokwehliswa kwezindleko.Ngenxa yezici zensimbi engagqwali, amakhasimende amaningi ajwayele ukusebenzisa insimbi engagqwali ukwenza izingxenye, futhi izinzuzo zisobala.
Izinzuzo ze-Ouzhan zensimbi engagqwali ezibomvu zanyathela izingxenye zokwakha
- Izakhiwo zamakhemikhali: Ukumelana namakhemikhali kanye nokumelana nokugqwala kwe-electrochemical yizona ezihamba phambili ngensimbi, okwesibili kuphela kuma-alloys we-titanium.
- Izakhiwo zemishini: Ngokuya ngezinhlobo ezahlukene zensimbi engagqwali, izakhiwo zemishini zihlukile. Insimbi engagqwali yeMartensitic inamandla amakhulu nobulukhuni, futhi ilungele ukukhiqiza izingxenye ezingamelana nokugqwala ezidinga amandla aphakeme nokuqina kokugqoka okufana nemiphini ye-turbine shafts nensimbi engagqwali. Imimese, amabheringi wensimbi engagqwali, njll. Insimbi engagqwali i-austenitic inepulasitiki enhle, hhayi amandla aphakeme kepha ukumelana nokugqwala okuhle kakhulu phakathi kwezinsimbi ezingenasici. Ifanele imicimbi edinga ukumelana nokugqwala kepha izakhiwo eziphansi zomshini, njengezitshalo zamakhemikhali nezitshalo zikamanyolo. Izinto zokusebenza zemishini, i-sulfuric acid, abakhiqizi be-hydrochloric acid, njll. Insimbi engagqwali ye-Ferritic inezinto ezilinganayo zomshini namandla aphansi, kepha iyamelana ne-oxidation futhi ilungele izingxenye ezahlukahlukene zesithando sezimboni.
- Inqubo yokusebenza: Insimbi engagqwali yase-Austenitic inenqubo yokusebenza okuhle kakhulu. Ngenxa yepulasitiki yayo enhle, ingacutshungulwa ibe amapuleti ahlukahlukene, amashubhu namanye amaphrofayili, alungele ukucindezelwa kwengcindezi. Insimbi engagqwali yeMartensitic inenqubo embi yokusebenza ngenxa yobulukhuni obuphakeme.
- Isimo sokwakhiwa okubomvu ngokuyisisekelo akugcini ngokulinganiselwa kwangaphandle kwengxenye yomkhiqizo uqobo.
Insiza eyenziwe ngensimbi engenasici ye-OEM umkhiqizi wezingxenye zensimbi engagqwali umkhiqizi
I-Ouzhan ngumkhiqizi ohlanganisa imboni kanye nezohwebo, enikezela ngosizo olulodwa lokuguqula nokwenza izinsizakalo zomshini wokugaya umshini. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, ingacubungula insimbi engagqwali enezingxenye ezinzile futhi ezinokwethenjelwa zokunemba okuphezulu. Lezi zingxenye zemishini zenziwa kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu zokusetshenziswa, ezitholakala kubahlinzeki bezingxenye ezisebenza kahle emakethe. Ithimba lethu lobuchwepheshe eliqinile nelingcweti kanye nokuphathwa kahle nokusebenza kwesistimu kungaqinisekisa ukukhiqizwa okuphelele kwezingxenye zensimbi engagqwali ZOKWAKHA. Ngaphezu kwalokho, izingxenye ezihlinzekiwe ZOKWENZA izingxenye zensimbi engagqwali zihambisana kakhulu nezindinganiso zekhwalithi futhi zingasetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene zezimboni. Futhi singahlinzeka ngensimbi engenasici yokuncintisana ye-CNC UKWAKHA izinsizakalo zamanani entengo kumakhasimende ethu anenani.
Ukusetshenziswa zensimbi engagqwali ezibomvu izitembu izingxenye UKWAKHA
Ezingxenyeni zensimbi ezingenasici ezidinga ukukhiqizwa ngobuningi, i-red punch ekwakheni isetshenziselwa ukukhiqiza okuningi, konga umjikelezo wokukhiqiza nezindleko.
Yikuphi ukusetshenziswa kwezinsimbi ezingenasici zokwakha izingxenye
Ukusakazwa kwensimbi engagqwali okungu-304 kusetshenziswa kakhulu ekwakhiweni kwezingxenyekazi zekhompuyutha nakumahadiwe wansuku zonke, kepha ezimbonini ezonakalisayo kakhulu noma emkhathini wasolwandle, kungcono ukusebenzisa insimbi engagqwali engama-316.
Ezingxenyeni ezincane ezinezidingo eziphakeme, ukubhoboza isibhakela esibomvu kungasetshenziselwa ukukhiqizwa ngobuningi, okufanele imishini yokulungisa izinto nezidingo zansuku zonke ezinezingxenye ezincane.
Izinzuzo zensimbi engagqwali yokwakha izingxenye
- Zonke izingxenye zokunemba zokufaka imikhiqizo yensimbi engagqwali zingaphansi kokuhlolwa kwekhwalithi eqinile.
- Ngokuya ngemidwebo noma amasampula wokukhiqiza izingxenye zensimbi engagqwali ezakha kahle.
Langaphambilini Kwenziwe ngentando carbon steel kokuzihlanganisa izingxenye
Olandelayo: Kwenziwe ngentando insimbi engagqwali izingxenye kokuzihlanganisa izingxenye mechanical